2018 RSW / US Suuqgey-Hay'adda Muuqaalka Sannadka Cusub | Martech Zone
2018 RSW / US Suuqgeynta-Wakaaladda Wakaaladda Sannadka Cusub
Khamiista, Febraayo 8, 2018 Jimco, Febraayo 9, 2018 Douglas Karr
Haddii aad weydiiso dersin milkiilayaasha wakaaladda suuqgaynta waxa ay qabtaan, ama ha korayaan ama yaanay korin, iyo sida ay uga macaashaan adeegyada ay bixiyaan fairly Waxaan si hubaal ah u hubaa inaad mid kasta oo ka mid ah ka heli doontid daraasado jawaabo kala duwan ah. Shaki iigama jiro in aan dhamaanteen jecel nahay waxa aan u sameyno macaamiisheenna, laakiin dhammaanteen waxaan ka helnaa waddo aan ku fiicanahay oo aan u jiheysanno jihadaas.
The 2018 RSW / US Suuqgeynta-Wakaaladda Wakaaladda Sannadka Cusub ee Infographic waxay ku saleysan tahay sahankeena ugu dambeeyay, waxayna diirada saareysaa laba qaybood oo ka mid ah warshadaha: marka hore, waxay muujineysaa sida suuqleyda iyo wakaaladuhu ay yihiin, layaab, inay si dhow isugula jaanqaadayaan caqabada la dareemay ee muhiimka ah, kordhinta kharashka la filayo, iyo rajooyinka maalgashiga iyo tan labaad, oo tilmaameysa xoogaa isbeddello muhiim ah oo wakaaladdaadu u baahan tahay inay ogaato.
Maxaad Wakaalad u kiraysanaysaa?
Hay'aduhu waxay leeyihiin faa'iidooyin miisaan ah oo aysan shirkaduhu si fudud isugu dhigmi karin. Ka wakaalad ahaan, maahan inaan aad uga walwalsanahay siyaasada xafiiska, shaqalaha banaanka, shaqaalaha, ama arrimaha maalinlaha ah ee shirkadaha gaabiya. Taasi maahan qodista shirkadaha, dabcan. Waxaa jira faa'iidooyin kooxo gudaha ah iyo ilo, sidoo kale.
Markii aan horay ugu sii socono shirkad, waxaan qabanaa tanno shaqo xagga hore ka dibna waxaan dardar galineynaa qiimaheena waqtiga. Shirkaduhu way qaddarinayaan inaan leenahay khibrad ay waqtiyo ugu baahan yihiin. Waa iskaashi weyn.
Isku soo wada duuboo, qiimaha hal ama laba shaqaale ah, waxaad caadi ahaan ka heli kartaa koox dhan hay'ad. Ma ahan waqti buuxa, dabcan, laakiin xitaa helitaanka waqti yar oo ah noocyada hal-abuurka kala duwan waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa waxqabadka ganacsiyadaada.
Taasi waa sababta sawir-gacmeedkan ka socda RSW / US uusan runtii ahayn wax lala yaabo. Waxaan gacan-qabsi kula shaqeynaa suuqleyda maalin walbana waxaan kula jirnaa tallaabo-qaadasho si aan u hubino inay u arkaan soo laabasho weyn maalgashigooda suuq-geynta. Waxaan si xoog leh u maal gashanaa tikniyoolajiyadda maxaa yeelay waxaan ku faafin karnaa kharashyadaas macaamiil badan. Waa sababta aan inta badan u haysanno qalabka ugu fiican iyo aaladaha aan ku shaqeyno marka loo eego macaamiisheenna - waa adeeg aan ku fidin karno iyaga.
Tags: hay'addahay'ad qarash gareysotartansuuq geynta dijitaalkasuuq geynRFPbaraha bulshada ayaa ku baxatalantihay'ad dhaqameed qarash gareeyaanisbeddellada